Midabada qaanso roobaadka siday u kala horeeyaan: waxa ay yihiin iyo sida ay u samaysan yihiin 🌈 | Saadaasha Shabakadda
Ma jiro wax ka qurux badan sidii subaxdii oo aad u kacdid oo aad u aragto qaansoroobaad, run? Dhacdadani waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo inay ku dhacdo oo kaliya Venus iyo halkan, meeraha Dunida.
Sidee loo sameeyaa? Waa kuwee Midabada qaansoroobaad iyo siday u kala horeeyaan Laga soo bilaabo tan iyo waxyaabo kaloo badan Waxaan halkaan kaga hadlaynaa khaasatan mid ka mid ah ifafaalooyinka saadaasha hawada ee soo jiitay welina aad u xiiseynaya aadanaha maanta.
1 Isha aadanaha, oo awood u leh inay aragto ifafaalooyin yaab leh
2 waa maxay qaanso roobaadka
3 Waa maxay midabada qaanso roobaadka?
4 Goorma ay dhacdaa?
5 Ma jiri karaan qaanso roobaro labanlaab ah?
6 Xiisaha ku saabsan qaanso roobaadka
Isha aadanaha, oo awood u leh inay aragto ifafaalooyin yaab leh
Si aan u fahmo waxa, sida ay u samaysan tahay iyo midabada qaansoroobaad ee la arko, ma jecli inaan ku bilaabo maqaalka aniga oo aan marka hore waxoogaa kuu sheegin. sida indhahayagu wax u arkaan. Sidan oo kale, way kuu fududaan doontaa inaad fahamto oo, sida xaqiiqada ah, marka xigta ee aad mid kale aragto, waad ka raaxeysan doontaa wax badan.
Rumayso ama ha rumaysan, isha aadamuhu waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu fiican dabeecadda (haa, xitaa haddii ay tahay inaad xirato muraayadaha indhaha). Indhaheennu aad bay ugu nugul yihiin iftiinka (taas oo, marka loo eego, ay caddaan tahay, taas oo ah, waxay ka kooban tahay midabada casaanka, cagaarka iyo buluugga ah), laakiin waxa noo muuqda in ay yihiin hal midab dhab ahaantii waa mid kale. Sababta Sababta oo ah waxay nuugaan qayb ka mid ah iftiinka iftiimaya shayga, waxayna ka tarjumayaan qayb kale oo ka yar; Si kale haddii loo dhigo, haddii aan aragno shay caddaan ah, waxa aan runtii aragno waa midabada aasaasiga ah ee muuqaalka isku dhafan, dhanka kale, haddii aan aragno shayga madow, waa sababta oo ah waxay qaadataa dhammaan shucaaca elektromagnetic-ka ee muuqaalka muuqaalka.
Iyo muxuu yahay muuqaalka muuqda? Kama badna aaladda elektromagnetic-ka ee isha aadanaha ay awood u leedahay inay aragto. Shucaacaas waxaa loo yaqaan iftiin muuqda, waana waxa aan arki karno ama kala saari karno. Isha caafimaad ee caadiga ah waxay awood u yeelan doontaa inay ka jawaab celiso dhererka dhererka laga bilaabo 390 ilaa 750nm.
waa maxay qaanso roobaadka
Dhacdadan quruxda badan waxay dhacdaa marka falaadhaha qorraxdu ay soo dhex maraan qaybo yar yar oo biyo ah oo ku hakanaya jawiga., sidaas awgeed abuurista midabyo cirka ku jira. Marka raajada ay qabato dhibic biyo ah, waxay u kala jajabisaa midabada muuqaalka muuqaalka, isla mar ahaantaana, way leexisaa; Si kale haddii loo dhigo, raajada iftiinka qorraxda waxaa dib loo qaboojiyaa markay galaan dhibicda iyo markay baxayaan labadaba. Sababtaas awgeed, dogobku wuxuu mar kale u socdaalaa isla jidkii imaatinka. Intaas waxaa sii dheer, qayb ka mid ah iftiinka la sifeeyey markii uu soo gelayo dhibicda ayaa ka muuqata, mar labaadna waa la dhalaalayaa markuu baxo.
Dhibic waliba waxay u egtahay midabSidaa darteed, kuwa laga arkaa iyada ayaa loo ururiyey si loo abuuro mid ka mid ah muraayadaha ugu quruxda badan dabeecadda.
Waa maxay midabada qaanso roobaadka?
ka Midabada qaansoroobaad waxaa jira toddobo, midabka koowaadna qaansoroobaadku waa casaan. KUwaxay u muuqdaan sidan:
Cagaar. Cagaar ayaa siiya waxa loogu yeero midabada qabow.
Qaanso roobaad Waxay dhacaan maalmo marka roobku da'o (badanaa badiyaa waa daruuro yar), ama marka huurka hawadu aad u sarreeyo. Labada xaaladoodba, xiddigga boqorka ayaa cirka ka muuqda, mar walbana dhabarka ayaan ku haysan doonnaa.
Ma jiri karaan qaanso roobaro labanlaab ah?
Laba qaanso roobaad ma aha wax aad u badan, laakiin waa la arki karaa waqti ka waqti. Waxay ka samaysmaan falaadhaha qorraxda ee gala qaybta hoose ee dhibicda ka dibna dib ayaa loo soo celiyaa ka dib marka la siiyo laba duudood oo gudaha ah. Marka sidaas la samaynayo, raajadu way gudbayaan oo ay ka baxayaan dhibicda siday u kala horreeyaan, iyagoo keenaya 7 midab oo qaansoroobaad ah, laakiin la rogay. Kan labaad wuxuu umuuqdaa mid ka daciifsan kan hore, laakiin wuxuu u muuqan doonaa si ka wanaagsan kan saddexaad haddii halkii laga heli lahaa laba dherigii gudaha ay ahaayeen saddex.
Booska lagu arko arkeesa dhexdooda waxaa la dhahaa »Aagga Alejandro ee Mugdiga ah".
Xiisaha ku saabsan qaanso roobaadka
Dhacdadani waxay dhacaysay malaayiin iyo malaayiin sano, laakiin xaqiiqadu waa taas ilaa saddex qarni ka hor cidina iskuma dayin inuu sharraxaad cilmiyeed ka siiyo. Ilaa waqtigaas, waxaa loo tixgelinayay hadiyad uu Eebbe siiyay bini-aadamka daadadka guud kadib (sida ku xusan Axdigii Hore), waxaa sidoo kale loo arkay silsilad xusuusin doonta Gilgamesh daadka (sida ku xusan "The Epic of Gilgamesh"), Griigtana waxay u ahayd ilaah farriimo inta u dhexeysa cirka iyo dhulka oo la yiraahdo Iris.
In dhaweyd, 1611, Antoinius de Demini wuxuu soo bandhigay aragtidiisa, oo markii dambe uu sifeeyay René Descartes. Laakiin iyagu ma ahayn kuwa kashifay aragtida rasmiga ah ee sameynta qaansoroobaad, laakiin Isaac Newton.
Aqoonyahankan weyn wuxuu awooday inuu muujiyo iyadoo la adeegsanayo birmiska in iftiinka cadceedda qorraxda ay kujirto midabada casaanka, oranji, jaalle, cagaar, buluug, indigo iyo violet. Midabada qaanso roobaadka.
Weligaa ma aragtay qaansoroobaad laba-laab ah? Miyaad horeyba u ogeyd waxa midabbada qaansoroobaadku yihiin?
Soo ogow daruuraha Píleo, qurxinta qaar leh midabada qaansoroobaad:
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Midabada qaansoroobaad
! sidee fiican
Ku jawaab rohanliz
Sidee fiicantahay in waxbadan laga ogaado qaanso roobaadka quruxda badan ee ka tarjumaya midabada cajiibka ah sida buluugga iyo buluuga ama giraanta ... .. maadaama laga soo saaray iyada oo loo marayo dhibic lagu xalliyo ray
Jawaab ku sii Beatriz Bermudez
Aniguna waxaan barto farshaxanka, mawduuca midabkuna waa ila yaab, waa dhacdo dabiici ah oo qorraxda leh dhibco roob iyo sharraxaaddeeda cilmiyaysan. mahadsanid.
Jawaab Yaqob Mizrahim Zarza.
waa wax xiiso leh in lagu ogaado qaab cilmiyeysan, midabaynta midabada qaansoroobaad.